Project မှ Opensky 777 ကိုင် swich ပြဿနာကိုဦးတည်။
Project မှ Opensky 777 ကိုင် swich ပြဿနာကိုဦးတည်။3နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #662
ဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်ယနေ့စီမံကိန်း Opensky ဘိုးအင်း 777 ပျံသန်းနှင့်၎င်း၏ချစ်စရာကောင်းတဲ့လေယာဉ်ငါရှိခြင်းပါပဲတစ်ခုတည်းသောပြဿနာက heaading ကိုင် swich လုပ်ကိုင်ဖို့မထင်ထားဘူးဆိုတာပါပဲ။
သင်ကတခြားလေယာဉ်များအတွက်အလိုတခုတည်းအဖြစ်ကိုင် swich နှိပ်ပေမယ့်အစားလက်ရှိသင်တန်းတွင်သော့ခတ်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအမြိုးမြိုးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းတူညီတဲ့အရာမပြီးရင်ချင်ပုံမှန်အတိုင်းနှုန်းအဖြစ်နှင့်တည်တည် ထား. အပေါ်ဖို့ set အော်တိုလေယာဉ်မှူး ။
မဆိုအိုင်ဒီယာယောက်ျားတွေ, တက bug ကိုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကမှားလုပ်နေသလော
Project မှ Opensky 777 ကိုင် swich ပြဿနာကိုဦးတည်။3နှစ်ပေါင်း2ရက်သတ္တပတ်အကြာ #664
ok ငါ kinda ကထွက်နေသေးတယ်င့် trhe Nav ကို Select လုပ်ပါခလုတ်ကိုမ nav ကိုင်သုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ထွက်လှည့်, သာအရာသာကိုယ့်ကို အသုံးပြု. ရပ်အတွက်မရှိမဖြစ်သော 2d ယာဉ်အတွက်အလုပ်လုပ်တယ် button ကို select လုပ်ပါဟာ Nave ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်အစား nav ကို select လုပ်ပါခလုတ်ကိုဖို့ 3d ယာဉ်အတွက် nav ကိုင် button ကိုဖလှယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်လျှင်ဘယ်သူ့ကိုမှသိ၏ငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ပါမယ်?